Kabtanka Mustaqbalka!! - Xiddigii Arsenal Ee Ay Jamaahiirtu Jeclaayeen Oo Talaabo Kale Oo Ka Farxisay Qaaday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKabtanka Mustaqbalka!! – Xiddigii Arsenal Ee Ay Jamaahiirtu Jeclaayeen Oo Talaabo Kale Oo Ka Farxisay Qaaday
Kabtanka Mustaqbalka!! – Xiddigii Arsenal Ee Ay Jamaahiirtu Jeclaayeen Oo Talaabo Kale Oo Ka Farxisay Qaaday
July 15, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 1
Daafaca bidix ee Arsenal ee Kieran Tierney oo kamida xiddigaha kooxdaas kuwooda ay jamaahiirtu ugu jecel yihiin ayaa qaaday talaabo kale oo soo jiidasho leh oo ah inuu soo gaabiyay fasaxiisii xagaaga isla markaana uu kooxda tababarka la bilaabay.
Tieney oo ay kooxdu siisay wakhti fasax ah kaddib markii uu xulka Scotland kala qayb galay Euro 2020 ayaa go’aansaday inuu soo koobo oo uu taas bedelkeeda tababarka la bilaabo xiddigaha kale ee kooxda.
Tierney ayaa dhaawac ku seegay kulankii koowaad ee dalkiisu uu guuldarrada kala kulmay Czech kahor inta uusan dhammaysan labadii ciyaarood ee England iyo Croatia.
Ciyaartoyda ayaa caadiyan la siiyaa ugu yaraan afar toddobaad oo fasax ah si ay usoo kabtaan una soo nastaan iyadoo looga badiyo marka uusan jirin tartan caalami ah oo dhacayaa balse Kieran ayaa go’aansaday inuu saddex toddobaad kusoo koobo.
Tierney oo ay Arsenal joogto dalkiisa Scotland wakhtigan ayay xiddigaha kale ee kooxdu gacmo furan kusoo dhaweeyeen iyaga oo tababar shaqsi-shaqsi ah ku samaynayay xerada Orium Performance.
Soo laabashada Tierney ayaa imanaysa maalin kaddib markii ay kooxdiisu natiijo fadeexad ah oo 1-0 ah kala kulantay kooxda Scottish-ka ah ee Hibernian.
Arrinta xiisaha gaarka ah u yeelaysa soo laabashada Tierney ayaa ah in kulanka soo socda ay Gunners la ciyaarayaan Rangers maadaama oo uu Tierney mudo dheer usoo ciyaarayay kooxda ay Rangers xifaaltamaan ee Celtic.
Natiijadii Arsenal vs Hibernian ma 1-0 ayay ahayd. 2-1 inay ahayd ayaan umalaynayay anigu hahahahahah